अबको ५ वर्ष ४ राशिले ढिलो नगरी यी व्यवसाय सुरु गर्नुहोस, सफलताले शिखर चुम्नेछ – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/अबको ५ वर्ष ४ राशिले ढिलो नगरी यी व्यवसाय सुरु गर्नुहोस, सफलताले शिखर चुम्नेछ
तपाईं कुनै विजिनेश सुरु गर्ने सोचिरहनुभएको छ ? वा सुरु गर्न गइरहनु भएको छ कि ? वा, कुन विषयमा प्रवेश गर्ने वा करिअर बनाउने भन्ने अलमलमा पो हुनुहुन्छ कि ? यदि छ भने तपाईंले राशिसँग जोडिएका केही कुराहरुतर्फ ध्यान दिनुभयो भने यसले ठूलो सहयोग हुनसक्छ । ज्योतिष विज्ञानका अनुसार करिअर, पढाई तथा व्यापार व्यवसायको सफलताका लागि राशिको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
यदि राशिलाई ध्यानमाराखेर पढाई,करिअर तथा व्यवसाय सुरु गर्ने हो भने सफल हुने संभावना बढी हुन्छ । कुन राशिलाई कस्तो पढाई, करिअर र व्यवसाय गर्नु उत्तम मानिन्छ, आउनुहोस् हेरौं । २०७७ सालको असोजको १० गतेदेखि यी ४ राशिलाई भाग्यले साथ दिदैछ । यो५ वर्षको समयमा तपाई असफलताबाट सफलता प्राप्तगर्न सक्नुहुनेछ । त्यसैले आफ्नो राशि अनुशार व्यापार गर्नुहोस
मेष : मेष राशि भएका व्यक्ति हरुका लागि गणित, फिजिक्स र अकाउण्ट बिषय मा अधिक सफलता मिल्छ । यी व्यक्ति हरुका लागि से’ना, आर्किटेक्ट, अ’स्त्र, श’स्त्र, बास्तुशास्त्र सम्बन्धी करिअर वा यस्ता बिषयसँग जोडिएको क्षेत्रमा व्यापार गर्दा उत्तम हुन्छ । यी क्षेत्रहरुसँग जोडिएर व्यापार गर्दा सफलता पाइन्छ । राशिमा मंगलको साथमा सूर्यको समेत उपस्थिति हुन्छ भने सरकारी क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुन्छ । यी राशि भएका मानिसले अधिक सफलताका लागि रातो रंगको कपडा लगाउन आवश्यक हुन्छ । मुसुरो दाल दान गर्दा शुभ फल प्राप्त हुन्छ ।
वृष :वृष राशिका मानिस कलाप्रेमी हुन्छन । यस्ता व्यक्तिहरु अभिनय, गायनमा जम्न सक्छन । अटोको व्यापार, इलेक्ट्रिक इक्वीपमेन्टको व्यापार समेत फाप्छ । यसैगरी, नाट्यकला, म्यूजिक सम्बन्धी व्यवसाय, आर्ट पेन्टिङ र जिओलोजीसँग सम्बन्धित व्यापार फाप्छ । यिनै क्षेत्रसँग जोडिएको व्यापार र व्यवसायमा यो राशि भएका व्यक्तिले सफलता पाउने संभावना बढी हुन्छ । यो राशिको स्वामी शुक्र हुन्छ, यसको अर्थ कपडा र किरानाको व्यवसाय पनि फाप्छ । अधिक सफलताका लागि यो राशि भएका व्यक्तिहरुले सेतो रंगको कपडा बढी लगाउनुपर्छ ।
तुला :यो राशि भएका व्यक्तिका लागि अभियन, संगीत, से’ना, व्यवस्थापन, कानून, बैंक, बिमा, फाइनान्स, मेसिनरी र कम्प्युटरको क्षेत्र फाप्छ । यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित नोकरी गर्नु वा व्यापार गर्नु लाभदायक हुन्छ । कमर्स, इकोनोमिक्स, वनस्पति शास्त्र, गणित बिषय चयन गर्नु शुभ मानिन्छ । अत्यधिक सफलताका लागि यो राशि भएका व्यक्तिले नीलो वस्त्र लगाउनुहोस् भने हनुमान चालिसाको पाठ गर्ने गर्नुहोस् ।
वृश्चिक :यो राशि भएका व्यक्तिका लागि सेना र शस्त्र सम्बन्धी कार्य, प्रहरी, रक्षा, कानून,सामाजिक सेवा,राजनीतिको क्षेत्रमा अधिक सफलता प्राप्त हुन्छ । फिजिक्स ,गणित, कानून, अकाउण्ट, राजनीतिशास्त्र, होटल म्यानेजमेन्ट, मानव संसाधन जस्ता बिषय रोज्नु लाभदायक हुन्छ ।यी विषयसँग जोडिएका व्यापार व्यवसाय पनि यस्ता व्यक्ति का लागि श्रेयस्कर हुन्छ । अधिक सफलताका लागि यो राशि भएका व्यक्ति ले रातो रंगको कपडा लगाउनु पर्छ भने हनुमानको पूजाअर्चना गर्नुपर्छ ।
दुई दिन भित्र त’पाईं’को काम बन्नेछ ,बि’ल्कुलै बे’वास्ता न’गरि दे’ख्ने बित्तिकै ॐ लेखी से’यर ग’र्नुहोला अबस्य पढेर नागको दर्शन गरौ
अस्पतालमै महान श्रीमान विनोदले यसरि मनाए श्रीमती अनिताको जन्मदिन, भाबुक हुदै भने चाडै घर लान्छु, यति धेरै माया देखाउदै पहिलोचोटी रमाइलो गरिन यसरी
बिहिबारको दिन भुलेर पनि गर्न हुदैन यि काम !